Shiinaha YASKAWA pallataynta robot MPL800Ⅱ warshad iyo soo saarayaasha | Jiesheng
Robot-ka Lagu Xardho Sharax
Sanduuqa saadka palletizing robot MPL800Ⅱ wuxuu leeyahay tayo deggan oo sax ah, oo leh culeyska xamuulka ugu badan ee 800Kg iyo ugu badnaan 3519mm. Qalabaynta aalado waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa baakadaha, saadka, cuntada, cabitaanka, kiimikada, dhismaha, daawada iyo warshadaha kale. Waxay dhammaystiri karaan xirxirida, maaraynta, xareynta, iyo dib u dhigida howlaha kala duwan sida cuntada, daawada, biirka iyo cabitaanka, iwm. Qalabka otomaatiga ah ee soosaarka soosaarka dhaqanka wuxuu si weyn u wanaajiyay awooda wax soo saar iyo faa'iidooyinka dhaqaale.
Xawaaraha sare iyo saadka saxda saadka palletizing robot MPL800Ⅱ wuxuu adeegsadaa dhudhunka dheer ee L-dhidibka iyo U-dhidibka ku habboon pallataynta si loo gaadho baaxadda ballaadhan ee ugu weyn. Qaab dhismeedka kontoroolka dhexe ee T-axis wuxuu ka koobnaan karaa fiilooyin si looga fogaado faragelinta Zero ee qalabka iyo qalabka durugsan. MOTOPAL-ka barnaamijka softiweerka waa la rakibi karaa, barnaamij-baraha ayaa loo isticmaali karaa inuu ku shaqeeyo hawlgalka pallatizing. Barnaamijka palletizing si otomaatig ah ayaa loo soo saaray, waqtiga rakibistu waa gaaban yahay, waxay ku habboon tahay in la doorto ama la beddelo hawlgallada, fudud oo si fudud loo barto, iyo hagaajinta waxtarka hawlgalka.
Faahfaahinta Farsamada ee Robot-ka Lagu Xardho:
2550Kg 10kVA 65 ° / seken 65 ° / seken
65 ° / seken - ° / seken - ° / seken 125 ° / seken
Sanduuqa saadka palletizing robot MPL800Ⅱ waa nooc gaar ah oo loo isticmaalo pallatizing iyo rarida bacaha, sanaadiiqda, iyo qalabka. Waxay xallisaa yaraanta shaqaalaha, waxay hagaajisaa wax-soo-saarka wax-soo-saarka shaqaalaha, waxay yareyneysaa kharashyada wax-soo-saarka, waxay yareysaa xoogga shaqaalaha, waxayna hagaajineysaa jawiga wax-soo-saarka. Sababtoo ah cudurka adduunka ee hadda jira oo faafa oo ku dhaca sambabka, isagoo dadka ka ilaalinaya howlaha wax soo saar urursan,mashiinada lagu shubo waxay noqdeen xulashada adeegsadayaal aad iyo aad u tiro badan.
Hore: YASKAWA pallataynta robot MPL500Ⅱ
Xiga: Rinjiyeynta Yaskawa Robot Motoman-Mpx1950
Robot Gawaarida otomaatiga ah
Robot-ka Lagu Xardho
Nidaamka Kala-bixinta Robotikada
Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Qabashada Gacanta Robot, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, 6 Axis Qabashada Robot,